काठमाडौंमा सवारीसाधनका चापका कारण नयाँ नियम लागु हुँदै, सवारीसाधन चलाउनेहरुले पढ्नुहोला – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौंमा सवारीसाधनका चापका कारण नयाँ नियम लागु हुँदै, सवारीसाधन चलाउनेहरुले पढ्नुहोला
काठमाडौंमा सवारीसाधनका चापका कारण नयाँ नियम लागु हुँदै, सवारीसाधन चलाउनेहरुले पढ्नुहोला
admin December 20, 2021 समाचार Leaveacomment 106 Views
काठमाडौं : सवारीसाधानको चापले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा बढ्दै गएको जामलाई कम गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका सडकले धान्नै नसक्ने गरी निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् ।
अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन, भाडामा मनलाग्दी, सवारी चालक र सहचालकको व्यवहारलगायतका कारण पनि निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दर बढाउँदा पनि वैज्ञानिक आधारभन्दा सवारी धनिलाई पोस्ने गरी बढाएको देखिन्छ ।
पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेसँगै भाडादर बढ्नु पनि स्वभाविक नै हो । तर, सरकारले कायम गरेको भाडादरबाट यात्रु ठगिँदा सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
जस कारण काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ता हरेक पटक कम्तिमा दुई रुपैयाँ ठगिन्छन् । सरकारले न्यूनतम भाडादर ४ किलोमिटरको १८ रुपैयाँ कायम गरे पनि सवारीसाधनले भने यात्रुबाट २० रुपैयाँ नै असुल्ने गरेका छन् ।
आइतबार (४ पुस) भक्तपुरबाट काठमाडौैं रुटमा चल्ने बसमा एक जना यात्रु चढे । उनलाई नयाँबानेश्वरमा ओर्लिनुपर्ने थियो । उनले ओर्लिने बेलामा भाडा दिन खोज्दा व्याँसीबाट कति रुपैयाँ हो भाइ भनेर सोधे । सहचालकले ३० रुपैयाँ भएको जवाफ फर्काए ।
यात्रुले भाडा सूची हेरे । व्याँसीदेखि नयाँबानेश्वरभन्दा अझ अगाडि बिजुलीबजारसम्मको भाडा २८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । ‘भाडा त २८ रुपैयाँ रहेछ नि,’ ती यात्रुले सहचालसँग प्रश्न गरे । । सहचालक कड्किँदै भाडा ३० रुपैयाँ नै लाग्ने बताए । ‘लागेको भाडा लिएको हो, हामीले बढी लिएका छैनौँ,’ सहचालकले भने ।
सहचालकको रुखो व्यवहार देखेर ती यात्रुले ३० रुपैयाँ दिए र दुई रुपैयाँ फिर्ता मागे । ‘लागेको भाडा माग्ने भए किन ३० रुपैयाँ भनेको त २८ भन्नुपथ्र्यो नि त,’ यात्रुले शान्त हुँदै भने । यात्रुको नम्र बोलीलाई दबाउने गरी ती सहचालक झर्किँदै भने, ‘त्यसो भए खुद्रा पैसा लिएर हिँड्नुस् । कहाँबाट दिनु दुई रुपैयाँ ? बरु तपाईँ मलाई तीन रुपैयाँ दिनुस् म पाँच रुपैयाँ दिन्छु ।’
सोही दिन आइतबार साँझ एक यात्रुले कमलविनायकदेखि दुधपाटीसम्मको भाडाबारे जिज्ञासा राखे । सहचालकले २० रुपैयाँ रहेको जवाफ दिए । तर, भाडा दर सूचीमा १८ रुपैयाँ थियो । अनि यात्रुले प्रश्न गरे, ‘कसरी २० रुपैयाँ ?’ यात्रुलाई जवाफ दिँदै चालकले भने, ‘भाडा त १८ रुपैयाँ हो, तर खुद्रा पैसा नभएर २० रुपैयाँ भनेको
Previous के तपाईले बैंकवाट ऋण लिनुभएको छ ? तुरुन्तै पढीहाल्नुस् नत्र
Next आज नेपाल बन्द ! विशाल आन्दोलन गर्ने घोषणा